अब पनि संविधान लेख्ने विचारमा कुनै दलका नेताहरु छैनन् भन्ने कुरा हालैको कचिंगलबाट पनि थाहा भैहाल्यो । सबैलाई पदमात्रै चाहियो र सबैलाई पैसा कमाउने मन्त्रालय मात्र चाहियो । नमूना प्रधानमन्त्री बनेर नया“ नेपाल बनाउने सपना देखेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई सबै दलका नेताहरुको चित्त बुझाउन गाह्रो परेको छ । आखिरमा पुरानै रोगले भट्टराईलाई पनि छोइ सके जस्तो छ । सेनामा माओवादी लडाकुको संख्या तोक्ने र समायोजन गर्ने काममा जुटेका भट्टराईलाई आफ्नै पार्टीका वैद्य पक्षको विरोधका कारण असजिलो भएको छ ।
माओवादी पार्टी भित्रैको किचलो नमेटिएको जस्तो बुझिन्छ । यसरी भट्टराईलाई आफ्नै पार्टीभित्रका विरोधी पक्ष मानिएका सभासद्हरुले अन्य दलका पदीय लालचामा फसेका दश पिचास मनोवृत्तिका व्यक्तिहरु सबैको चित्त बुझाएर सरकार चलाउनु फालमको च्युरा चपाउनु जस्तै हुनसक्छ ।
देश र देशवासीका लागि सरकारमा जाने मन्त्रीहरुले जुनसुकै मन्त्रालयमा बसेर काम गरे हुन्छ । मन्त्री शब्दको अर्थ नै नजान्ने मन्त्री भएर डा. बाबुराम भट्टराईलाई के सल्लाह दिन सक्लान् ? मन्त्री शब्दको अर्थ हुन्छ सल्लाहकार । सल्लाह दिन जान्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मान्त्र मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेमा मात्र राम्रो सल्लाह प्राप्त गरेर सरकार चलाउन सजिलो होला ।
प्रधानमन्त्रीका चाहना सबै सकारात्मक देखिएपनि सहयोगी आफ्नै पार्टी भित्रका नेता र अन्य साना दलहरुबाट नकारात्मक सोच तेस्र्याएर बाटो बन्द गरिन लागेको जस्तो बुझिन्छ ।
सतिको सराप परेको देशमा राम्रो काम गर्नेलाई सधैभरी अभागी राजकुमार बहादुर शाह बन्नुपर्छ । पुरानो सोचलाई दिमागमा नराखेर नयाँ
सोचको बाटोतिर अगाडी बढ्न सबै नेताहरुलाई प्रेरणा मिलोस् नेपाली जनताको चाहना यही छ, सरकार होइन, संविधान चाहिएको छ । बरु सबै मन्त्रीलाई मन्त्री होइन उपप्रधानमन्त्री बनाएर पनि नेपालको संविधान तोकिएको अवधीमा नेपाली जनताले पाउन, यसैमा सबैको कल्याण हुनेछ । अस्तु ।